कसरी एक स्ट्रगलिंग सामग्री-नेतृत्व लिंक निर्माण अभियान बचत गर्नुहोस् Martech Zone
गुगलको एल्गोरिथ्म समयको साथ परिवर्तन हुँदैछ र यस कम्पनीहरूका कारणले गर्दा उनीहरूका बारे पुन: सोच्न लगाइएको छ एसईओ रणनीतिहरु। बढ्दो रैंकिंगका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मध्ये एक सामग्री-नेतृत्व लिंक निर्माण अभियान हो।
तपाईंले यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्‍यो जहाँ तपाईंको एसईओ टीम प्रकाशकहरूलाई आउटरीच ईमेलहरू पठाउन कडा परिश्रम गर्दछ। त्यसो भए, तपाईंको लेखकहरूले समर्पित रूपमा सामग्री सिर्जना गर्दछ। तर, अभियानको केहि हप्ता पछि, तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि यसले कुनै परिणाम प्राप्त गरेको छैन।
असफलतालाई असर गर्ने धेरै कारकहरू हुन सक्छन्। यो एक कमजोर अवधारणा, समाचारमा बाहिरी घटनाहरू, वा, तपाईंको आउटरीच ईमेलहरूमा सही प्रतिक्रिया प्राप्त नगर्न सक्छ। साथै, उच्च डोमेन प्राधिकरण साइटहरूको साथ लिंकहरू निर्माण गर्न सजिलो छैन।
त्यसो भए, यदि तपाईंको अभियानले राम्रो यातायात आकर्षित गरिरहेको छैन भने, जोड नदिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो रणनीति चिमटाउन आवश्यक छ, अधिक प्रयासमा राख्नुहोस् र अपेक्षित परिणामहरू भेला पार्नुहोस्। अब, यदि तपाईं अझै पनि आफ्नो गरीब प्रदर्शन सामग्री-नेतृत्व लिंक निर्माण रणनीतिसँग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए यो लेख तपाइँको लागि हो।
1. प्रकाशकले खोजिरहेको कुरा सिर्जना गर्नुहोस्
दिमागमा राख्नुहोस् कि सम्पादक अन्य धेरै सामग्रीको साथ लोड हुनेछ। त्यसोभए, उनीहरूले ती श्रोताहरूको मनपर्दो लेख्ने रूप लिनेछन्। त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको सामग्री आफ्नो आउटरीच ईमेलको अनुसार योजना बनाउनुहुन्छ ताकि प्रकाशकले घण्टा बर्बाद गर्नु पर्दैन अगाडि र बाहिर संवाद गर्न।
आफैलाई दर्शकको जुत्तामा राख्नुहोस् र तपाईं के पढ्न चाहानुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। सान्दर्भिक डाटा स्रोतहरू, उद्धरणहरू, छविहरू, आदि समावेश गर्नुहोस् यसलाई आकर्षक र सजिलै पढ्न योग्य बनाउनको लागि। प्रकाशकको ​​रुचिसँग मेल नखाने कुनै कुरा सिर्जना नगर्नुहोस्।
2. तपाईको हेडलाइन्सलाई रमाईलो बनाउनुहोस्
एक को तपाईंको अभियान बनाउनको लागि प्रभावशाली तरिकाहरू काम भनेको सुरुको आउटरीचमा प्रकाशकलाई तपाइँको हेडलाइटहरू पिच गर्नु हो। यसले प्रकाशकलाई तपाइँको सामग्रीको बारेमा धारणा लिन र तपाइँको अभियानको बारेमा तिनीहरूलाई उत्साहित बनाउन मद्दत गर्दछ।
यसका साथै प्रकाशकहरूले बहुविध प्रकारका सामग्री कभरहरू ढाक्दछन् जुन एक इन्फोग्राफिक वा फारम पाहुना पोष्टको रूपमा हुन सक्छ। साधारणतया, अनुरोध गर्नुहोस् यदि विषय उनीहरूको श्रोताको लागि प्रासंगिक हो र तिनीहरू यसलाई प्रकाशित गर्न चाहान्छन्। एकै पटकमा छवटा फरक कथाहरू बिक्री नगर्नुहोस्, किनकि यसले प्रकाशकलाई भ्रमित गर्दछ। सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइसकेपछि तपाईंको हेडलाइनले के माग गर्छ।
3. तपाईंको आउटरीच ईमेलहरू अनुसरण गर्न नहिचकिचाउनुहोस्
धेरै समय, तपाईं आफ्नो अघिल्लो संचार को लागी एक प्रतिक्रिया प्राप्त छैन तर आशा छोड्नुहुन्न। माथि उल्लेख गरेझैं प्रकाशकहरू प्राय: व्यस्त हुन्छन् त्यसैले उनीहरूले केहि वार्तालापहरूको लुप गुमाउन सक्छन्। यसैले, तपाईं आफ्नो आउटरीच ईमेलमा अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले प्रतिक्रिया वा कभरेज प्राप्त गर्नुभएन भने।
यद्यपि यसले तपाइँको पिचको कोमल रिमाइन्डर प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्दछ जसले प्रकाशकसँग तपाइँको दृष्टिकोणको बारेमा अझ राम्रो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। साथै, यदि प्रकाशकले तपाईंको अघिल्लो सामग्रीमा रुचि हराएको छ भने, एउटा अनुगमनले उनीहरूलाई यसमा ध्यान दिन प्रोत्साहन गर्दछ र तपाईंको विचारलाई पनि अनुमोदन गर्न, यदि यो हालको ट्रेंडिंग शीर्षकहरू अनुसार प्रासंगिक छ भने।
4. लिंकका लागि सान्दर्भिक साइटहरू पहिचान गर्नुहोस्
के तपाइँले तपाइँको पहिलो अभियान पिच गर्नु भन्दा पहिले प्रकाशकहरूको सम्भावित सूचीको बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुभयो? यदि होईन भने तपाईले ठूलो गल्ती गर्नुभयो। प्रकाशकको ​​कोठा बुझ्न यो सल्लाह दिइन्छ र यो तपाइँको व्यवसाय संग सम्बन्धित छ।
तपाईं उनीहरूले सम्बोधन गरेको शीर्षकहरू ट्र्याक गरेर भविष्यको संभावनाको लागि प्रकाशकहरूको पाना धान्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरिकाले, तपाईंसँग प्रकाशकहरूको सूची हुनसक्दछ जो तपाईंको सामग्रीमा रुचि राख्दछ। यसबाहेक, यसले तपाईंलाई प्रकाशकहरूको कार्यलाई व्यक्तिगत रूपमा बुझेर तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ।
5. तपाईंको आउटरीच ईमेल निजीकृत गर्नुहोस्
के तपाइँ प्रत्येक प्रकाशकलाई संलग्न गराउन यस्तै प्रकारको आउटरीच ईमेलहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, तपाईं सम्पादकहरूको पक्षबाट चासोको अभाव देख्नुहुनेछ। साथै, यदि तपाइँ तपाइँको क्लिक-थ्रू दर ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले प्लम्मेटिंग ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंको पिचिंग सन्दर्भ ड्राफ्ट गर्नुहोस् ईमेलको प्रापकको अनुसार।
यसका अतिरिक्त, यदि तपाईंले शीर्ष-स्तरीय मिडियामा अभियान थप्नुभयो र कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएन भने, दोस्रो-स्तरीय प्रकाशनहरूको सूचीमा विचार गर्नुहोस्। प्रकाशकहरू बिभिन्न एजेन्डा र सामग्री तालिकाले भरिएका हुनाले, केवल एकमा पिचिंग गर्दा अवसरहरू गुमाउन सकिन्छ। पठाईएको सन्देशलाई परिमार्जन गर्न नभुल्नुहोस्।
6. विभिन्न प्लेटफार्महरू मार्फत दृष्टिकोण
यो एक सरल तर प्रभावी छ लिंक निर्माण कार्यनीति। यदि तपाईंको सामान्य रणनीतिले ईमेल संचार समावेश गर्दछ भने, यस पटक तपाईं नयाँ प्लेटफर्म ट्याप गर्नुहोस्। हुनसक्छ, प्रकाशकहरूको ईनबक्स ईमेलको साथमा भरिएको छ त्यसैले तिनीहरूमध्ये केही हराउँछन्।
तपाईं आफ्नो अभियानको लिंक ट्विटर वा लिंक्डइन मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ, वा फोन लिन सक्नुहुन्छ। भीड ईमेलहरू काट्नु र तपाईंको अभियानहरूको लागि प्रकाशकको ​​ध्यान खिच्ने यो एउटा कार्यनीति हो।
7. शीर्ष समाचारमा रहनुहोस्
कहिलेकाँही खराब अभियानका कारण अभियानले काम गर्दैन। कसैलाई पनि पहिले नै भएको कुरामा चासो छैन। त्यसोभए, तपाईंको वरिपरि आउने घटनाहरू र घटनाहरू हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरण को लागी, तपाइँ हिउँदहरु को लागी एक यात्रा अभियान शुरू गर्नुभयो। यो गर्मी मा जस्तै प्रभावकारी हुनेछ?
याद राख्नुहोस्, आउँदो घटना वा भर्खरको तातो शीर्षक वा समाचार भन्दा कम्तिमा १ 15 दिन पहिले शीर्षक रोज्नुहोस्। यसका अतिरिक्त, तपाइँ तपाइँको लक्षित श्रोतालाई रुचि एक सामान्यीकृत विषय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको पिच मा कारण निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ किन तपाइँ अब अभियान पठाउँदै हुनुहुन्छ।
8. विषय लाइनहरूमा ध्यान दिनुहोस्
तपाई सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईको इ-मेलहरू पनि खोलिएको छ कि छैन? यसका लागि, तपाइँ ट्र्याकि software सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको अर्को आउटरीच रणनीति बनाउन। त्यसो भए, यदि तपाईंले गरीब खुला दरहरू देख्नुहुन्छ भने, तपाईं विभिन्न कार्यनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पादकको ध्यान खिच्न आकर्षक विषय लाइनको साथ ईमेलहरू पठाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं नयाँ ईमेलहरूको लागि नयाँ विषय लाइनहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै कुरा सिर्जना गर्ने बारे हो जुन प्रकाशकहरूलाई चासो लाग्छ र तिनीहरूलाई अधिक जानकारीको लागि तपाईंको ईमेल मार्फत क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको विषयलाई स्पष्ट रूपमा बताउनुको सट्टा तपाई एक्स्क्लोभरी रिसर्च प्रकट गर्दछ वा नयाँ डाटा जस्ता कामहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
9. विशेष कुरा प्रदान गर्नुहोस्
यदि तपाइँ प्रकाशकलाई विशेष कुरा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले निश्चित रूपमा यसलाई किन्नेछन्। यसले तपाईंको खराब प्रदर्शन गर्ने अभियानलाई पनि बचाउन सक्छ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, एक निजीकृत दृष्टिकोण बनाउनुहोस् र संचार ठीक र सान्दर्भिक राख्नुहोस्।
साथै, यदि तपाईंको अभियान प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन भने, प्रकाशकहरूसँग काम गर्ने विचार गर्नुहोस् जसले तपाईंसँग पहिले काम गरेका छन् र तिनीहरूलाई एक अवधिको लागि विशेष सामग्री प्रस्ताव गर्नुहोस्। एकचोटि तपाइँले एक ठूलो अभियान को एक मजबूत हुक प्राप्त गर्नुभयो, तपाईं अर्को लिंक निर्माण सेवा शुरू गर्न सक्नुहुनेछ र शीर्ष-स्तरका प्रकाशनहरूमा दृष्टिकोण।
माथि उल्लेखित पोइन्टहरूले निश्चित रूपमा तपाईंलाई तपाईंको सुधार गर्न मद्दत गर्दछ सामग्री-नेतृत्व लिंक निर्माण अभियानहरू, तर यसले तपाईको स्तर निर्धारणमा सकारात्मक नतिजा लिन समय लिन सक्दछ। यो अवधि तपाईंको गतिविधिहरूमा, तपाईंको उद्योगमा प्रतिस्पर्धा, लक्षित कुञ्जी शब्दहरू, ईतिहास र तपाईंको डोमेनको सामर्थ्यमा निर्भर गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, तपाईंले आफ्नो प्रगति ट्र्याक राख्नुपर्दछ, तपाईं अब कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने नोटबाट सुरू गरेर। त्यहाँ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट रैंकिंग को एक वास्तविक आशा र अधिक कसरी प्राप्त गर्न को लागी एक सडक नक्शा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं त्यसपछि तपाईंको वेबसाइट, अनलाइन प्रदर्शन, र व्यापार सुधार गर्न योजनाको साथ गतिविधिहरू सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: ब्याकलिंक आउटरीच रणनीतिब्याकलिinking्क आउटरीच रणनीतिअभियान अभियान गर्नुहोस्आउटरीचएसईओ रणनीतिहरु
ईपीआर ब्रेकिंग मार्केटिंग हो… यूरोपमा